Hello Nepal News » मेस्सीलाई फकाउन नयाँ अध्यक्षका तीन ‘अपत्यारिला प्रस्ताव’ : के–के छन् प्रस्तावमा ?
मेस्सीलाई फकाउन नयाँ अध्यक्षका तीन ‘अपत्यारिला प्रस्ताव’ : के–के छन् प्रस्तावमा ?
यो सिजनको पूर्वसन्ध्यामै क्लब छाड्ने निर्णय गरेका स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान नयाँ सिजन बार्सिलोनामै रहनेमा अझै शंकाहरू छन् । उनले यो सिजनको अन्त्यसँगै बार्सिलोना छाडेर आफूले चाहेको क्लबमा फ्री ट्रान्सपफरमा जाने बाटो खुला छ । र, त्यसो हुने सम्भावना पनि छ । तर, नयाँ अध्यक्ष जोन लापोर्टा मेस्सीलाई कुनै पनि हालतमा क्लबमै राख्न प्रयासरत छन् । उनले सार्वजनिक रूपमै मेस्सीलाई क्लब नछाड्नका लागि फकाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने र मेस्सीसहितको नयाँ टोली बनाउन सबैथोक गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच, स्पेनका केही स्थापित खेल मिडियाले प्रकाशित गरेको ताजा रिपोर्टअनुसार नयाँ अध्यक्ष लापोर्टाले मेस्सी र उनका एजेन्ट समेत रहेका पितासँग आन्तरिक छलफल सुरु गरेका छन् । बार्सिलोनासँग मेस्सीको सझौता सकिन आजका मितिले ठीक ८५ दिन बाँकी छ । मेस्सीको सम्झौता सकिने अवधि नजिकिँदै गर्दा नयाँ बोर्डले मेस्सीसँग छलफल गर्न र नयाँ सम्झौताका लागि सक्रियता बढाएको हो । लापोर्टाको टिमका अधिकारीलाई अहिले मेस्सीका सम्बन्धित पक्षसँग नयाँ सम्झौताका लागि छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ ।
रिपोर्टअनुसार लापोर्टाले मेस्सीसँग नयाँ सम्झौताका लागि तीन खास प्रस्तावसहित छलफल सुरु गरेका छन् । तीमध्ये दुई प्रस्ताव निकै कठिन छन् । पहिलो– टोलीको पुनर्निर्माण र च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्य । नयाँ सिजनका लागि मेस्सीलाई नै केन्द्रमा राखेर टोलीको पुनर्निर्माण गर्ने । र, त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार विभिन्न पोजिसनका प्रतिभाशाली युवा खेलाडी भित्र्याएर मजबुत टोली तयार पार्ने । नयाँ सिजनअघि टोलीलाई नयाँ ढंगले तयार पारेर चयाम्पियन्स लिग जित्न सक्ने टोलीको निर्माण गर्ने । क्लबका लागि मेस्सीलाई विश्वासमा लिन र फकाउनका लागि यसलाई सामान्य प्रस्ताव वा विषय मान्न सकिन्छ ।
दोस्रो प्रस्ताव– मेस्सीलाई ३८ वर्षको उमेरसम्मका लागि आकर्षक सम्झौता दिने । रिपोर्टअनुसार नयाँ अध्यक्षले मेस्सीसँग लामो समयसम्मका लागि सम्झौता गर्न चाहेका छन् । चाँडै ३४ वर्ष पुग्न लागेका मेस्सीलाई उनको उमेर ३८ वर्षको हुँदासम्म सिनियर टोलीमा मुख्य योजनामा राख्ने गरी नयाँ सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । यदि यसैअनुसार सम्झौता भए मेस्सीलाई थप चार सिजन बार्सिलोनामै देख्न पाइन्छ । यस अवधिपछि मेस्सीले बार्सिलोनाबाटै सन्यास लिन सक्ने नयाँ अध्यक्षको सोच देखिन्छ । यो सिजन सकिँदा मेस्सी ३४ वर्षका भइसक्नेछन् ।
तेस्रो प्रस्ताव– मेस्सीलाई हालको भन्दा पनि बढी सुविधा । मेस्सी अहिले नै विश्व फुटबलका सर्वाधिक कमाउने खेलाडी हुन् । तर, नयाँ अध्यक्षले मेस्सीलाई फकाउनका लागि नयाँ सम्झौता भए हालको भन्दा राम्रो तलब तथा सुविधा दिने गरी अफर गरेका छन् । स्मरण रहोस्, केही समयअघि मात्रै लिक भएका बार्सिलोनाका अफिसियल कागजातअनुसार मेस्सीले अहिले नै एक वर्षमा १२६ मिलियन युरो तबल–भत्ता लिने गर्छन्, यो एकदमै अपत्यारिलो हो । तर, लापोर्टाले मेस्सीलाई फकाउनका लागि नयाँ सम्झौता भएको दुई सिजनसम्म हालको भन्दा बढी पैसा मेस्सीलाई दिने गरी प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति १४ चैत्र २०७७, शनिबार १५:०७